एकैपटक ४ जना बच्चालाई जन्म ! आमा भन्छिन् -एउटालाई फकाउन थाल्यो, अर्को रुन्थ्यो | Tungoon
काठमाडौं । यी हुन् प्रणय हर्ष, प्रशन्न हर्ष, प्रतीक हर्ष र प्रशंसा । काठमाडौं म्हेपीका यी बालबालिका दाजु–भाइ र बहिनी हुन्। चारैजना अहिले कक्षा ७ मा पढ्छन् । सँगै स्कुल जान्छन्, सँगै फर्कन्छन् । स्कुलमा पनि एउटै सेक्सनमा बस्छन्। आश्चर्य नमाने हुन्छ– हरेक साल जन्मदिनसमेत एकसाथ मनाउँछन् । किनभने यी चम्ल्याहा हुन्।
आमा प्रमिला बज्रचार्यले २०६२ वैशाख २८ मा एकैपटक उनीहरूलाई जन्माएकी हुन् । उनीहरूले एलकेजीसम्म दरबारमार्गको मोर्डन नेवा: स्कुलमा पढे । अहिले राजधानीस्थित रोजबड स्कुलमा पढ्छन्। आमा प्रमिला र बुबाप्रमोद हर्षले बोल्ने मातृभाषा नेवारी बुझ्छन् तर फर्काउन जान्दैनन् । ‘घरमा बाबामामु नेवारीमै कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँले बोल्नुभएको हामी बुझ्छौं तर फर्काउन आउँदैन,’ चम्ल्याहामध्येकी कान्छी प्रशंसाले भनिन् ।
उनीहरूबीच आपसमा सामान्य झगडा पनि पर्छ । एक जनाले गल्ती गर्दा चारै जनाले पिटाइसमेत खाएका छन् । चारै जना खेल्दा गमला फुटेपछि सबैले पिटाइ खाएको प्रशंसाले सुनाइन् । आफूहरू चारै जना एकसाथ जन्मिएको भन्ने कुरामा उनीहरू आफैं पनि अचम्म मान्छन् । ‘अरूका आमाबाबुले एउटा सन्तान जन्मिएको दुई तीन वर्षपछि मात्रै अर्को जन्माउँछन् । हामी त एकै पटक जन्मियौं,’ कान्छा प्रतीक भन्छन्, ‘हामी त धेरै भाग्यमानी । बरु आमा–बाबाले चाहिँ हामी चारै जनालाई कसरी हुर्काउनुभयो होला ? कुनै खेलौना ल्याउँदा चारै जनालाई चाहिने भन्दै मागेर हैरान पाथ्र्यौं ।’ एउटालाई केही खानेकुरा दिँदा अरूले पनि मागेर अभिभावकलाई सताएको उनीहरू सम्झन्छन् ।
‘बेफाइदा भनेको जे भए पनि, जे गरे पनि चार भाग लगाउनुपर्ने मात्रै हो,’ प्रणय भन्छन्, ‘अरू त फाइदै फाइदा ।’ पाँच कक्षासम्म हुँदा उनीहरू सबै एउटै खालका कपडा लगाउँथे । अबचाहिँ फरक–फरक साइज र रंगको लगाउन थालेका छन् । उनीहरूलाई बुधबार विद्यालयमा भेट्दा तीनै भाइको ज्याकेट मात्रै उस्तै थियो । चारै जना बाटोमा हिँड्दा अचम्म मानेर हिँड्ने गरेको उनीहरूको अनुभव छ । टयाक्सीमा चढ्दा ड्राइभरले नै अचम्म मानेको घटनासमेत उनीहरूले सुनाए । प्रणय भन्छन्, ‘टयाक्सी चालकले सबै तपाईंका छोराछोरी हो भनेर सोधे । मामुले चम्ल्याहा हो भनेपछि चालक गाडी चलाउनै छाडेर हामीलाई हेरिरहे ।’ विद्यालयमा नयाँ शिक्षक र विद्यार्थीले समेत चासो लिएर सोध्ने गरेको उनीहरूले सुनाए । ‘धेरैजसोले त चम्ल्याहा हुन् भन्ने थाहा पाउनेवित्तिकै हामीसँगै बसेर फोटो खिचाइहाल्छन्,’ प्रशन्न भन्छन् ।
उर्मिला बज्राचार्य (आमा)
मेरो टेस्टयुट बेबी हो । पहिलो स्टेजमै चार जना छन् भन्ने थाहा भयो । महिना पुगेर जन्मिए । सबैभन्दा छोरी एक्टिभ थिइन । दुई जनालाई त दुई महिनासम्म इक्युभेटरमा राख्नुपर्‍यो । डाक्टरले दुई जना लिएर घर जान भन्नुभएको थियो । चारै जना लिएर मात्रै जाने भनेर कुरेर बसेँ । सुत्केरी भएको एक महिनापछि चारै जना लिएर फर्किएँ । हुर्काउन गाह्रो भयो । एक जनालाई केयर गर्दा अर्को रुन्थ्यो । एकैचोटि सम्हाल्न गाह्रो थियो । त्यसैले बच्चा हेर्ने सहयोगी राखेकी थिएँ । एउटालाई फकाउन थाल्यो, अर्को रुन्थ्यो । एउटा बिरामी हँुदा तीनवटा घरमै छाडेर जान्थेँ । एकै पटक दुई/तीन जना बिरामी भइरहन्थे । सुई लगाउन जाँदा चारै जाना लैजानुपथ्र्यो । त्योचाहिँ साह्रै गाह्रो । सुई लगाएको दिन त सुत्नै दिँदैनथे । चारै जना रोएको रोयै गर्थे । चारै जनालाई हेर्न सम्हाल्न सकिँदैनथ्यो । आफूले हेर्न नसक्दा कस्तो कस्तो लाग्थ्यो । कहिले एउटा बिरामी हुँदा अर्कोलाई पनि सथ्र्यो । त्यसैले अहिले छुट्टाछुट्टै बेडको व्यवस्था छ । एउटाको जुठो अर्कोलाई खुवाउँदैनौं ।
बच्चाले दु:ख दिँदा अलिकति पीडा हुन्छ । अरू बेला त खुसी नै हुन्छु । विगतमा चोटपटक लाग्ला कि भन्ने डर थियो । अहिले नराम्रो संगतमा पर्लान् कि भन्ने डर छ । कहिलेकाहीँ उनीहरू सानातिना विषयमा झगडा पनि गर्छन् । कोभन्दा को कम भन्ने घमण्ड जस्तो देखाउँछन् । कहिलेकाहीं त उनीहरू हामीप्रति नै आइलाग्छन् । चारैजना मिलेर कराउँछन् । उनीहरू मिलेर खेलेको र पढेको देख्दा भने औधि खुसी लाग्छ ।
Previousहिमपातले चिनियाँ सामान आयात ठप्प
Nextदूरसञ्चार प्राधिकरणको अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना अलपत्र
‘भर्जिन’ जुगल हिमालमा पहिलोपल्ट मानव पाइला पुग्दै
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा भारतमा फैलिएको कोरोनाभाइरस भेरिएन्टलाई चिन्ताजनक भेरिएन्ट अर्थात ‘भेरिएन्ट अफ कन्सर्न’ घोषणा
May 11, 2021 | बिश्व, समाचार
काठमाडौं उपत्यकामा १५ दिन निषेधाज्ञा थप गरियो
आज दिउँसो ३ बजे कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक
भारतमा एकै दिन ३ हजार ८७६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु